Panoramic Display အထိ စမတ်ဖုန်းတွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလာသလဲ?
9 Apr 2019 . 4:31 PM
၂၀၀၀ ဝန်းကျင် နှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့ Keypad ဖုန်းတွေကို လူအများ အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကျော်၂၀၀၈ လောက်ကစပြီး Touch Screen ပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို စတင် အသုံးပြုခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ တော်တော်များများဟာ Touch Screen ပါတဲ့ စမတ်ဖုန်း တွေကို သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်လာ ကြပါတယ်။ အဲ့လိုကနေပြီး စမတ်ဖုန်းတွေဟာလဲ ၂၁ ရာစုမှာ လူတွေရဲ့ မရှိမဖြစ် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတစ်ခု အနေနဲ့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သုံးစွဲတဲ့လူတွေ ပိုများလာတဲ့အခါ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ ကုမ္ပဏီတွေက သုံးစွဲသူတွေ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံတွေ ရအောင် ဖန်တီး တီထွင်ကြပါတယ်။
OPPO ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ F Series ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ချိန် F1 Series မှာတော့ ဘေးဘောင်ပါဝင်တဲ့ ပုံမှန် 16:9 Aspect Ratio မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားပဲ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ အကုန်ပိုင်း ဖုန်းမျက်နှာပြင် ဒီဇိုင်းအချိုးအစားကို မျက်နှာပြင်အပြည့် ပုံစံအဖြစ် စတင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှာ OPPO F5 Series တွေက အဓိက ပါဝင်ခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူတွေ ပိုမိုအကြိုက်တွေ့တဲ့ Bezel-less ဘေးဘောင်ကျဉ်း ဒီဇိုင်းမျိုးတွေကို ပိုမို အသက်သွင်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ၂၀၁၈ နှစ်လယ်လောက်မှာ စတင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ OPPO F7 Series ထုတ်ကုန်တွေမှာတော့ မျက်နှာပြင်အချိုးအစား ကို တိုးမြှင့်ဖန်တီးပေးနိုင်လာခဲ့သလို စမတ်ဖုန်းလောကမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Notch Screen အဖြစ်ပါ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့လကမှ မြန်မာပြည်မှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ OPPO F11 Pro ဟာဆိုရင်တော့ အလယ်ကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ Pop-up Selfie Camera နဲ့ ဘေးဘောင်တွေ Notch တွေမပါဘဲ တကယ့် မျက်နှာပြင်အပြည့် ခံစားမှုကို ရရှိစေမှာပါ။ 90.9% Screen-to-Body Ratio နဲ့ Crescent Curve ဒီဇိုင်းတွေက ဖုန်းသုံးပြီး တီဗီကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊ ဂိမ်းဆော့တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားမှုမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆.၅ လက်မ အရွယ်ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ပါဝင်တဲ့ F11 Pro ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ၄၉၉၉၀၀ ကျပ်နဲ့ နိုင်ငံအနှံ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။